Eden Hazard Oo Walaac Ku Abuuray Jamaahiirta & Maamulka Chelsea Xilli Si Daran Loola Xiriirinayo Real Madrid. - Wargane News
Home Sports Eden Hazard Oo Walaac Ku Abuuray Jamaahiirta & Maamulka Chelsea Xilli Si...
Eden Hazard ayaan ku fududaan doonin inuu heshiis cusub u kordhiyo kooxdiisa Chelsea xilli si daran loola xiriirinayo kooxda Real Madrid.
26-jirkaan heerka caalami ee qarka u saaran inuu markiisii labaad ku guulesyto horyaalka Premier League ayaa heshiis ilaa iyo 2020 kula jira kooxda ka dhisan galbeedka London, balse Madrid ayaa sida la aaminsan yahay quuldareyneysa xidigaan heerka caalami.
Si kastaba Hazard haatan diyaar uma ahan inuu heshiiska u kordhiyo kooxda Blues sida lagu qoray shabakadda caalamiga ah ee Goal.
“Ma jiro heshiis cusub oo aan saxiixayo waqtigaan” ayuu yiri xidigii hore Lille oo la hadlayay Sky Sports.
“Waxaan diirada saarayaa bisha ugu dambeysa, waana wada hadli doonaa kadib”
“Hadda maskaxdeyda kuma jirto, waxaan heystaa laba ilaa sadex sano, waxaan kaliya doonayaa inaan xili ciyaareedkaan si wanaagsan ku dhameesto, waana arki doonaa wixii ka dambeeya”
Chelsea waxey qarka u saaran tahay iney hanato labada koob ee FA Cup iyo Premier League iyadoo Antonio Conte uu kooxdiisa u hogaamiyay finalka tartanka qadiimiga ah iyo sidoo kale inuu kusii dhawaanayo hanashada horyaalka.
Walaaca ugu weyn ayaa soo wajahi kara Blues madama ay maalmahaan dadaal ugu jirtay iney heshiis cusub oo Real Madrid ka hor istaagi kara ugu yaraan ay ka saxiixdo Eden Hazard.